अर्थ/वाणिज्य Archives - Page2of 310 - Recent Nepal News
कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्व बैंकद्धारा १६ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको नयाँ प्याकेज घोषणा
काठमाडौं । विश्वमा महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न विश्व बैंकले सहायता रकम वृद्धि गरेको छ । विश्व बैंकले उपलब्ध गराइरहेको सहायता रकममा दोब्बरले वृद्धि गरेको जनाएको छ । बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को निर्देशक समितिले कोरोनाविरुद्ध लड्न १४ विलियन अमेरिकी डलर (१६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ) रकम परिचालन गर्नेछ। यसअघि आइएफसीले ८ बिलियन अमेरिकी डलर (९ खर्ब...
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टको आम्दानी गत वर्षको भन्दा ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको छ। शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्सले गत वर्ष ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको छ। विगत तीन वर्षको अवधिमा कम्पनीले उत्पदन बिक्रीमार्फत ३२ प्रतिशतले आम्दानी सुधार गरेको छ। अन्य कम्पनीहरुको नाफा तथा आम्दानीमा गिरावट देखिदै आएकोमा जगदम्बा सिमेन्टको भने नाफा तथा अन्य आम्दानीमा सुधार देखिएको हो। यसै अवधिमा कम्पनील...
अमेरिकी डलर ११८ नाघ्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य ११८ रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि बिक्रीदर मूल्य ११८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ। खरिददर मूल्य ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकेको छ। यसअघि २०१८ अक्टोर १० का दिन डलरको बिक्रीदर मूल्य ११९ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेर उच्च रेकर्ड राखेको छ। सो रेकर्ड पुनः तोडिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभावले असर पार्ने देखिएपछि लगानीकर्ता डलर र सुनमा...
डा.युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री पद धरापमा, अबको अर्थमन्त्री को ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित नहुने भएका छन । नेकपाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा पुनः मनोनित नहुने भएका हुन । दुई वर्षअघि उनलाई सरकारको शिफारिशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिइन । नेकपाको पार्टी सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ज...
४०० ट्यांकरको ताला खोल्ने ‘मास्टर की’ गायब‚ चालकको हातमा !
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमकोे सिनामंगलस्थित सबैभन्दा ठूलो हवाई इन्धन डिपोमा तेल बोकेर आउने सबै ट्यांकरको ताला खोल्ने साझा साँचो (मास्टर की) हराएको छ। साँचो हराएको पुष्टि १९ माघमा भएको हो। तर, अहिलेसम्म भेटिएको छैन। हराएको ‘मास्टर की’ले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को रक्सौल डिपोदेखि सिनामंगलस्थित निगमको हवाई इन्धन डिपोमा तेल ओसार्ने १८१ ट्यांकरको ताला खुल्छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा इन्धन वितरण ग...
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विभिन्न १३ विधाका २५ व्यवसायी ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति’ (सिआइपी) बाट सम्मानित भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित ‘व्यावसायिक व्यक्ति सम्मान तथा सुशोभन कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती व्यवसायीलाई सिआइपी सम्मान प्रदान गरेका हुन् । गत कात...
टेलिकमले ल्यायो विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक ‘विन्टर अफर’
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक विन्टर अफर (Winter Offer) उपलब्ध गराएको छ । उक्त अफर अन्तर्गतको सेवा कम्पनीको वार्षिकोत्सव (२०७६ माघ २२ गते) देखि नै लागू भइसकेको छ र आगामी चैत ३० गतेसम्म उपयोग गर्न सकिने छ । यो भन्दा पहिले उपलब्ध अटम अफर (Autumn Offer) अन्तर्गतका सेवाहरुमा केही थप सुविधा तथा नयाँ प्याकेज समेत उपलब्ध गराएर विन्टर अफर ल्याइएको छ । जीएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड त...
डिसहोमलाई इन्टरनेट सेवा विस्तारको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिसहोमलाई इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने अनुमति दिएको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डिसहोमलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिएको तीन महिना पछि अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । डिसहोमले भिस्याट प्रविधिमार्फत टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । कम...
ग्यासको मूल्य वृद्धि, पेट्रोल र डिजेलको घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेको भन्दै निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । मूल्य बढेसँगै खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३७५ रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले ग्याँसको भाउ बढाए पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाए...
उपत्यकाका १८ वटा पेट्रोल पम्प हटाइने (कुन हट्दै छन् नामसहित)
काठमाडौं । उपत्यकाको सडक सुधार तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सडक छेउका १८ वटा पेट्रोल पम्प हटाइने भएको छ । काठमाडौंका १२ र ललितपुरका ६ वटा पेटोल पम्प हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल आयल निगम र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई पत्राचार गरेको हो । सडक छेउका र सडकको घुम्तीमा रहेका पेट्रोल पम्पको व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याल...